Guryaha ugu wanaagsan Adriatic - Geofumadas
Oktoobar, 2008 Leisure / waxyi, dhowr
Shaki kuma jiro in fasax ku yaala xeebta Talyaaniga ee Adriatic Sea waa waaya-aragnimo aan la ilaawi karin. In la helo jawi wanaagsan oo ku saabsan baahida loo qabo isticmaalayaasha isticmaala aagaggaas si ay u qaataan wakhti xorta ah, Hotel Hotel Special ayaa soo bandhigay fikradda ganacsade yaryar oo horumar ka sameeyay horumarka, abuurista iyo soo-celinta adeegyada dalxiiska.
Sidaa daraadeed, boggani waxa uu doonayaa in uu hubiyo adeegyada ugu fiican ee malaayiin ka mid ah dalxiisayaasha, dalxiisayaasha iyo dadka ku nool Riviera Romagnola sanad kasta; Sidaa daraadeed, xayaysiiskeeda ugu fiican waxaa loogu talagalay all'albertatore iyo hawlwadeenada hoteelada, guryaha, guryaha iyo qolalka martida iyo xarumaha kale guud ahaan.
Maxaa jira Hotel Rimini
Waxay leedahay codsi fara badan oo kuu oggolaanaya inaad dooratid goobo ku saleysan goobta juqraafiga; waxa soo saaraya natiijooyinka ugu fiican ee ku hareeraysan degaankaas oo aan ahayn kaliya xalalka xayeysiiska ah, laakiin sidoo kale meelaha soo jiidashada leh ee dhaqanka Romagna waxaa ka mid ah waddooyinka gudaha, cuntooyinka delicious nadiifinta iyo meelaha xiisaha leh. Inkastoo kororka codsiyada ku salaysan khariidadaha webka, waxay u fiicnaan laheyd in ay wax ka qabato wax badan oo ka mid ah heshiisyada ay isticmaalayaashu u isticmaalaan isticmaalka.
Hirgelinta ku saleysan dhadhanka
Boggu wuxuu leeyahay shaqeyn raadin oo kuu ogolaanaya inaad heshid dalab qiimo leh, oo ku saleysan sifooyinka sida Internet-ka, barkadda, baraha piano, baaskiiladaha, garaashka, sauna, iwm.
Waxaa ka mid ah bogga SpacialeHotel waa farsamooyinka luqadaha badan, oo ay ku jiraan Isbaanish, Faransiis, Jarmal, Japanese, Portuguese, Ingiriis, iwm. Inkasta oo uu ku shaqeynayo farsamadani maahan mid aad u fiican, taas oo soo saartey xiriiro jaban, tusaale ahaan adigoo isticmaalaya luqad aan ahayn Talyaani iyo xulashada mid ka mid ah astaanta midigta. Inta aynaan sugeyno wanaajinta faahfaahinta, waa in aan aqoonsanno dadaalkooda si aan u leenahay tarjumaad luqado badan.
Waxaa intaa sii dheer, boggu wuxuu fursad u siinayaa in uu soo bandhigo xayeeysiisto oo uu bixiyo lacag la'aan oo laga yaabo in uu diyaar u noqdo martida goobta, kaddibna waxaa lagu dhamaystirayaa raadinta bedelaad "qiimo cusub" ama "qiimo hoose"
Ugu dambeyntii, haddii aad ku socoto xeebta Adriatic, waxay noqon laheyd qiimeyn SpecialeHotel.
Post Previous«Previous Maxaa ku dhici doona Shirka III ee GIS lacag la'aan ah
Post Next Geofumadas, akhrinta 10 ee aan ku talinayoNext »